Mogadishu Journal » Haweeneydii Ugu Horreysay ee Afrikaan ah oo Hoggaanka u Qabatay Ururka WTO
Marwo Ngozi Okonjo-Iweala oo ah dhaqaaleyahan wax ku baratay dalka Mareykanka heysatana dhalashadiisa, qofka labaad ka ahayd hoggaanka Bankiga Adduunka, weliba taageero ka haysatay 104 dal oo xubnaha ka ah Ururka Ganacsiga Addunka ayaa jahwareer ku abuurtay ka dib markii Maamulka Madaxweyne Trump uu diidmo dhuldhiggay.
Sida warbaahinta sheegtay, asbaabta diidmada waxay ku saleysneed dhowr arrimood: (1) Shakiga uu ka qabo Marwa Ngozi Okonjo-Iweala oo fikir ahaan aad ula safan kuwa caalamiga ah (internationalists); (2) Shakiga uu ka qabo hoggaamiyaha Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo u dhashay Afrika iyo; (3) Xakamaynta saamaynta Shiinaha ee qaaradda Afrika, gaar ahaan dalalka Itoobbiya, Kenya, Nigeria iwm.
Ururka waxaa u qorsheysnaa in November 9, 2020 la ansixiyo musharraxa ay isku raacsan dhammaan xubnaha, balse diidmada Mareykanka inuu ku biiro aqlabiyadda ayaa qasabtay in dib loo dhigo xulashada ilaa doorashada madaxtooyada Mareykanaka ay ka dhammaato. Khaskhashaadda maamulka Trump ayaa qayb ka ahayd ciyaarta awoodda caalamka.